सनातन धर्मसंस्कृतिमा मातृशक्तिलाई अत्यन्त आदरणीय मानिन्छ । आध्यात्मिक वा सामाजिक ग्रन्थमा ऋषिले भनेका छन् महिलालाई सम्मान गर्नुपर्छ । पुराातत्विक विचारकाअनुसार जुन राष्ट्रमा महिलाको सम्मान हुँदैन उसको पतन हुनजान्छ । यो साँचो हो । महाभारत यसका ज्वलन्त उदाहरण हो । जहाँ द्रौपदीको चीरहरणको फल कौरवसहित कैयन योद्धालाई आफ्नो प्राण गुमाएर चुकाउनु परेको थियो ।
पौराणिक कथा अथवा ऋषिद्वारा रचित संहिताहरुमा महिलाको अधिकार तथा कर्तव्यका वर्णन गरिएको छ । महाभारतमा जब पितामह मृत्युको प्रतिक्षा गरिरहेका थिए उनले युधिष्ठिरको नीतिसम्बन्धी महत्वपूर्ण कुरा बताएका थिए । उनले महिलाको सम्मान र अधिकारमा धेरै जोड दिए । यहाँ तपाईंलाई यी प्राचीन कुराबारे बताउनेछौं ।
१. महाभारतकाअनुसार त्यो घरमा प्रसन्नताको बास हुन्छ, जहाँ नारी खुसी रहन्छिन् । जुन घरमा स्त्री दुःखी हुन्छिन्, त्यो घरको सम्मान हुँदैन, त्यहाँबाट लक्ष्मी र देवता पनि जानेछन् । यस्तो स्थानमा विवाद, कटुवचन, दुःख र अभावको प्रवलता हुनेगर्छ ।
२. जुन परिवारमा छोरी वा स्त्रीलाई दुःख छ, त्यो परिवार पनि दुःखबाट मुक्ति पाउन सक्दैन । त्यहाँ दुःखको प्राप्ति हुन्छ । यो दुःख शोकमा बदलिन पनि सक्छ । अतः परिवारमा छोरी होस् वा बुहारी उसको सम्मान हुनुपर्छ । जहाँ उनीहरुको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ देवगणको पनि बास हुन्छ ।
३. मानिसले त्यस्तो कुनै काम गर्नुहुन्न जसले आफ्नैलागि पश्चाताप र शोक बोकेर ल्याओस् । शास्त्रकाअनुसार स्त्री, बालक, बालिका, गाई, असहाय, भोका, रोगी, तपस्वी र मरणासन्न व्यक्तिलाई सताउनु हुन्न ।